musha Asia Lalisa Manoban Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeThai rapper neiyo zita rezita “Pokpak". Yedu Lalisa Manoban Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika iye zvino.
Ehe, munhu wese anoziva iye ndeimwe yeanonyanya kufarirwa mabasa echikadzi muK-pop. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Lalisa Manoban's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Lalisa Manoban Upenyu hwepakutanga uye Imhuri Yemashure:
Kutanga kubva, Lalisa 'Lisa' Manoban (yakabhabhatidzwa Pranpriya Manoban) akaberekwa pazuva re 27th muna Kurume 1997 paBuriram Province muThailand. Iye ndiye ega mwana akaberekwa mumubatanidzwa pakati paamai vake Chitthip Bruschweiler nababa vake vashoma vanozivikanwa vekuzvarwa.
Iyo yakanaka rapper uyo anotevedzera semuimbi uye mutambi ndeweThai nyika uye neSouth Eastern Asia mhuri mavambo. Muduku Lisa akakurira muBangkok, guta guru reThailand raakakurira asina vana vekubereka.
Kunyange zvakadaro, Lisa mudiki akanaka akanakidzwa nekurererwa kuguta rine vanhu vazhinji muThailand - Bangkok - kwaakararama hupenyu hwemwana anotamba uye anofara achinyemwerera zvinotapukira uye magirazi anovhenekera.
Lalisa Manoban Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Pakazosvika Lisa panguva yepakutanga redzidzo yake yepachikoro chePraphamontree Chikoro chekutanga uye chechipiri, akange atove nehukama mukuimba nekutamba pamwe nevanoyemura mukurumbira muSouth Korea Pop indasitiri yakadai seBig Bang uye 1NE2.
Amai vaLisa vakakurumidza kutora kufarira kwavo kwekutanga uye vakasarudza kumutumira kuchikoro chekutamba kwaaigona kuzara kuzere kwekutamba uye weSouth Korea Pop mimhanzi.
Lalisa Manoban Kurapwa Kwepakutanga Hupenyu:
Saka zvakatanga kutanga kwaLisa kwekutanga pakuratidzira biz, chiitiko chakamuona achitora chikamu mumakwikwi ekuimba. Pane imwe nhambo, akapedza semumhanyi mumakwikwi e2019 ekuimba iwo akanzi "Kumusoro 3 Akanaka Maitiro eThailand".
Lisa ane mukurumbira akaenderera achipinda mumakwikwi emadhanzi akawanda kusanganisira ane mukurumbira "Kuva Wekutanga". Panguva yepamusoro yebasa rake rekutanga, Lisa akabatana nevatambi vekutamba "We Zaa Cool" uye akahwina mukurudziro inosimudzira navo futi.
Lalisa Manoban Road To Fame Nyaya:
2010 yaive nguva yekutendeuka kwaLisa vakapinda mumaYG Entertainment mabhuku akaitwa muThailand. Akatora chinzvimbo chekutanga kunze kweanoshamisa 4000 vanyoreri akaongorora kwekambani yevaraidzo. Nekuda kweizvozvo, YG Entertainment ongororo yakakoka Lisa kuti apinde mukambani yevaraidzo kuSouth Korea semudzidzi.
Nekuvandudzika, Lisa akave wekutanga asiri wechiKorea nhengo yeYG Entertainment. Akadzidzira nekambani kwemakore mashanu achitamba nevamwe vaaiti budding maartist saMV Taeyang we 'Big Bang,' Bobby naMino we 'YG Varaidzo'. Nguva zvakare yakamuona achikura uye akanakisa hunyanzvi hwekubhonga huri hunhu hwehupi hwake hwehu rap.
Lalisa Manoban Kukwira Kuzivikanwa Nhau:
Paakapedza kudzidziswa kwake mu2016, Lisa akanyorwa senhengo yeboka revasikana veSouth Korea inonzi 'BlackPink,' pasi pezita re'YG Varaidzo '. Blackpink yakatanga neakare album "Square One". Iyo album yaive neyakaimba senge "Whistle" uye "Boombayah" yakakwira zvese maSouth Korea machati uye yakasvika panhamba yekutanga pane Billboard world digital nziyo machati.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Lisa ndiye wechidiki nhengo yeboka revasikana veBlackpink iyo zvakare inosanganisira Kim Jennie, Rose naKim Jisoo. Rudzi rweThai rwakaenderera mberi ruchikwira kuita BlackPink's lead rapper, vocalist, uye mutambi. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Lalisa Manoban Hukama Hupenyu Chokwadi:
Kuenderera mberi kuhupenyu hwerudo hwaLisa, hapana kunge paine shanduko dzakanyorwa muhukama hwake hwehukama nekuti haana kuroora panguva yekunyora uye haana kudanana nemumwe munhu anogona kunzi mukomana wake. Kana iye haana kubatwa muwebhu yehukama kukakavara.
Rapper iyi inonyanya kutarisa pakumurera achikurisa nebasa rake neboka reBlackPink, sarudzo yakaonekwa seyekuchenjera nevazhinji vanotenda K-pop chiitiko chakavimbika icho chiri kuzopaza zvizere US nedzimwe nyika dzekutanga.
Lalisa Manoban Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Kune vashoma vashoma vanovaraidza ndivo chete mwana akazvarwa kuvabereki vavo uye Lisa anoitika kutarisa iro runyorwa. Tinokuunzira chokwadi nezve nhengo dzemhuri yaLisa pamwe nezvinyorwa zviripo zvemadzitateguru ake.
Nezve baba vaLalisa Manoban:
Panga pasina kutaurwa nezvaLisa wekuzvara baba uyo akaparadzaniswa kubva kuna mai rapper mushure mekuzvarwa kwake. Lisa pane ane anotsigira anotsigira-baba - Marco Brüschweile anga ari mumhuri kubva pahudiki hwake. Marco ndewemhuri yeSwitzerland mavambo uye chimvuramabwe kubva kumusoro-kirasi yemhuri kumashure. Inonyanya kuzivikanwa saTenzi Chef Marco, baba-nhanho vanozivikanwa semukurumbira weThai cuisine pamwe nemunyori wezvimwe zvitsva zvekugadzirira. Iye ari padyo chaizvo naLisa uye anodada nezvaakabudirira.
Nezve amai vaLalisa Manoban:
Chitthip Bruschweiler ndiamai vaLisa. Kusiyana nedzimwe nhengo dzemhuri yake, Chitthip anochengetedza uye anoedza nepaanogona napo kunzvenga nhepfenyuro. Zvisinei, iye akambobuda muhombodo yake kuti aratidzwe pane chimwe chikamu chemutambo wakasiyana - "Black Pink House padivi pemwanasikana wake. Pamusoro pazvose, Chitthip mudzimai akanaka kumurume wake pamwe naamai vanotyisa kuna Lisa uyo waanowanzopotsa nekuda kwekuti vanogara vari voga munyika dzakasiyana.
Nezve hama dzaLalisa Manoban uye hama:
Hichichisiri nhau kuti Lisa Manoban haana hama uye hama dzakasarudzika uye hazvina kunyatsozivikanwa kuti ane vakaroora kana hama dzemumba. Zvimwechetewo, hapana zvinyorwa zvevaimbi vanamai nanasekuru nasekuru apo babamunini, vanababamunini, vazukuru, vazukuru uye nanambuya vachiri kuzozivikanwa panguva yekunyora iyi biography.
Lalisa Manoban Hupenyu hwepamoyo:
Lisa ane hunhu hwakafanana hune makings eAries Zodiac chiratidzo. Iye ane simba, anotamba, anoita-akatarisana, asingadzoreki, zvakasikwa, anotsigira uye dzimwe nguva anokurumidza.
Kuwedzerwa kuna Lisa's zvinonakidza persona ndeye yake yakangwara chimiro chekusaburitsa zvakapfuura zvinodikanwa kana uchikurukura nezve hupenyu hwakavanzika uye hwega. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kutenga, kutora mifananidzo, modelling, kufamba uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Lalisa Manoban Mararamiro:
Taura nezve mashandisiro anoita Lalisa Manoban uye kushandisa mari yake, iyo huwandu huwandu hwemamiriyoni maviri emadhora emamiriyoni - panguva yekunyora - inotora kwayakabva pakubata kwake, kuimba, kuenzanisira nekutamba apo vamwe vanotora chimiro chemari yaanowana. inowana kubva kutsigira zvigadzirwa seSamsung uye Adidas.
Kunyangwe akaongorora mashandisiro anoita Lisa mari yekushandisa mukutenga zvinhu zvakaita semota nedzimba zvichiri kuongororwa, anorova vateveri seanorarama hupenyu hwemutambarakede sezvinoonekwa mumifananidzo yake inemafoto kumahotera anodhura pamwe chete neyemukati kana padyo zvinhu zvinofungidzirwa kuti ndezvake.
Lalisa Manoban Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Lalisa Manoban nyaya yehucheche uye biography, isu tinopa zvishoma zvinozivikanwa kana zvisingataurike chokwadi pamusoro pake.
Hunyanzvi hwemuviri pamwe ndiyo yekupedzisira ajenda pane runyorwa rwaLalisa Manoban rwezvinodiwa sezvo kutaridzika kwake kwakanaka uye kukwirira kutonhorera kwe5 '6 ″ kunoita kuti atore matatoo sekunaka kusiri madikanwa.
Lalisa Manoban anoda hombe katsi. Muchokwadi, aimbove nezvisikwa zviviri zvakanaka muThailand zvinonzi Hunter naTiga. Rudo rwake rusingaperi rwema files achiri kutaurwa nenzira iyo yaanofunga nayo mafoto navo.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve chinzvimbo chaLisa pazvinhu zvekutenda, uyezve haape chinongedzo chekuti mutendi here kana kuti kwete. Sezvo nyika zhinji dzeAsia dzichizivikanwa kunge dzisina chitendero, mikana irikuenderana nekuve asingatendi.
Unoziva here kuti Lisa inyowani? (munhu anoziva uye anogona kushandisa mitauro yakati wandei). Ane mutauro wakakwana wechirungu uye anoziva mataurirwo echiJapan, Thai pamwe neKorea.
Rapper haaputi, kana kupihwa kunwa panguva yekunyora. Kunyanya zvakadaro, kambani yake - YG Varaidzo - ine mutemo wakamira unodzivirira nhengo kuputa uye kunwa.
Unoziva here kuti Lalisa Manoban pakutanga akatumidzwa kuti Pranpriya Manoban - iyo yaizivisa zita remadunhurirwa rekuti Pockpack? zvisinei, akazoita nzira yekufembera iyo yaida kuti zita rake rishandurwe kuva Lalisa zvinoreva kuti 'uyo anorumbidzwa'.
Thanks for reading vedu Lalisa Manoban Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Solo praisis, a Lisa não é rapper princess uye sim a Jennie.